काठमाडौं । लगातार ४ महीनासम्म बचतमा रहेको चालू खाता चालू आर्थिक वर्षको पाँचौं महीनामा घाटामा गएको छ । गत साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महीनामा चालू खाता निरन्तर बचतमा थियो । तर, अहिले आयात बढेसँगै नेपालको मुद्रा बाहिरिएकाले चालू खाता घाटामा गएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को मङ्सिर महीनामा चालू खाता रू.२५ अर्ब ४१ करोडले घाटामा रहेको छ । अमेरिकी डलरमा १८ करोड २४ लाखले घाटामा रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा चालू खाता रू.६५ अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको थियो । यसअघि विगतका ४ आवसम्म लगातार घाटामा रहेको चालू खाता गत साउनमा भने बचतमा देखिएको थियो । चालू आव २०७७/७८ को साउन महीनामा चालू खाता रू. २५ अर्ब ४१ करोडले बचतमा रहेको थियो ।
चालू खाता घाटामा गए पनि शोधनान्तर भने निरन्तर बचतमा छ । देशबाट बाहिरिने रकमभन्दा भित्रिने रकम बढी हुँदा मङ्सिरमा शोधनान्तर स्थिति रू. १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू.२३ अर्ब ३० करोडले बचतमा रहेको थियो ।
आर्थिक वर्षको शुरूमा आयात कम भएको र अहिले आयातमा सुधार भएकाले चालू खाता घाटामा जानु स्वाभाविक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । विप्रेषण आय बढे पनि आयात बढिरहेको र पर्यटन आय नभएका कारण चालू खाता घाटामा देखिएको उनको भनाइ छ । मङ्सिरसम्ममा विप्रेषण १० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.४ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । गतआवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह शून्य दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो ।
कोरोनाको त्रास घट्दै गएपछि बिस्तारै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि आधाभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा आएको देखाएको छ । ‘उद्योगहरूको क्रमशः सञ्चालन हुन थालेपछि आयात पनि सोहीअनुसार बढ्दै जान्छ । यसको प्रभाव चालू खातामा देखिन्छ,’ डा. भट्टले अभियानसँग भने ।
आयातमा सुधार आई चालू खाता घाटामा गएको देखिए पनि मङ्सिरसम्ममा कुल वस्तु आयात ९ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेर रू.५२५ अर्ब ५० करोड कायम भएको छ । आयात वृद्धिदर गत महीनाको भन्दा मङ्सिरमा कम रहेको छ । गत कात्तिकसम्ममा कुल वस्तु आयात १० दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
समग्रमा आयात घटे पनि चालू आवको ५ महीनामा कुल वस्तु निर्यात ५ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५० अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।
गत आवको यही अवधिमा निर्यात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यसबीच अलैंची, जुटका सामान, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), चाउचाउ, पश्मिनालगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ । तर, पाम तेल, दाल, जस्तापाता, उनी गलैंचा, लत्ताकपडालगायत वस्तुको निर्यात भने घटेको छ ।
चालू आवको पाँचौं महीनामा चालू खातामात्र होइन, विदेशी विनियम सञ्चितिसमेत मङ्सिर महीनामा घटेको छ । कात्तिकमा १५ खर्ब ६ अर्ब सञ्चितिमा रहेको विदेशी विनिमय मङ्सिरमा भने घटेको देखिन्छ । गत असार मसान्तमा रू. १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति कात्तिकमा १५ खर्ब ६ अर्ब पुगेको थियो । तर, मङ्सिर मसान्तमा भने रू. १४ खर्ब ७४ अर्ब ३४ करोडमा झरेको छ ।